China Silicone Coasters ifektri abakhiqizi | SJJ
Izindawo ezibushelelezi zamatafula, i-bar counter top noma i-tray zihlala zenza impilo yethu ibe yesimanje futhi ibe nesitayela, ama-coasters we-silicone aphelele ukuvikela amatafula akho, i-bar counter top kanye nethileyi ekushiseni nasemswakeni. Futhi ama-coasters abicah abamba amapuleti, izinkomishi, izitsha kanye nokusika ngesisekelo esiqinile, esivikelekile nesingasheleli ...
Izindawo ezibushelelezi zamatafula, i-bar counter top noma i-tray zihlala zenza impilo yethu ibe yesimanje futhi ibe nesitayela, ama-coasters we-silicone aphelele ukuvikela amatafula akho, i-bar counter top kanye nethileyi ekushiseni nasemswakeni. Futhi ama-coaster abicah abamba amapuleti, izinkomishi, izitsha kanye nokusika ngesisekelo esiqinile, esivikelekile nesingasheleli. Ama-silicone coasters enziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme ze-silicone ezinobungane, ezemvelo futhi ezingezona ezinobuthi. Izinto zokwakha zithambile futhi zihlala isikhathi eside, ama-logo anemibala egqamile, ngakho-ke ama-silicone coasters angasetshenziswa noma yikuphi njengezipho zokuphromotha, izipho zebhizinisi noma inhloso yabanye. Umumo ojwayelekile uyindilinga futhi uyisikwele, kepha ithimba lethu lochwepheshe lingakha ubujamo ngokuya ngemiklamo yakho, nemibala nayo ingenziwa ngezifiso. Ama-coasters we-silicone aveza kahle imibono nemiqondo esemqoka evela kubaqambi, inhlangano noma abaxhasi bezimali.
Imiklamo: 2D, amalogo we-3D ohlangothini olulodwa noma zombili izinhlangothi, Izimo zingenziwa ngezifiso
Usayizi: cishe i-90/100 mm / 120 mm, noma eyenziwe ngezifiso
Amalogo: Amalogo angaphrintwa, afakwe embossed, alahliwe, agcwaliswe ngombala nokunye
Okunamathiselwe: Akukho okunamathiselwe noma ukulandela imiyalo yakho
Langaphambilini Amakhava Esembozo Senkomishi Yesilicone
Olandelayo: Abaphathi bekhadi le-Silicone
Ipeni Lezinkuni Eziqoshwe Ngokhuni
Iqhwa Multi Tool